Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Nyochaa ọrịa cancer prostate: ụmụ nwoke, oge bụ ugbu a
Nọvemba bụ oge maka ụmụ nwoke niile, gụnyere ndị agha ochie, iji nyochaa ahụike ha. HALO Diagnostics, onye ọsụ ụzọ na nchọpụta na ọgwụgwọ ọrịa kansa prostate, na-agba ndị nwoke 45+ ume ka ha nweta nyocha prostate mgbe niile.
Ihe dị ka ụmụ nwoke 250,000 ka a ga-achọpụta ọrịa kansa prostate kwa afọ - ihe dị ka 11,000 n'ime ndị a chọpụtara nọ na sistemụ nlekọta ahụike Veterans naanị.
"Nyocha na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-anwụ site na ọrịa kansa prostate site na 25-30%," ka Dr. John Feller, onye agha agha na onye isi nlekọta ahụike na HALO Diagnostics na-ekwu.
Dr. Feller na-atụ aro ka ndị na-azụ anụ na-enyere ibe ha aka icheta mkpa nyocha nke prostate maka ndị ikom 50-75 (afọ 40-45 maka ndị ikom nwere nnukwu ihe ize ndụ). Ọ gbakwụnyere, "Ịlekọta ndị agha ochie na-echetara m mgbe niile nghọta miri emi nke obodo na ebumnuche nke ndị agha agha niile na-ekerịta."
Michael Crosby, Onye isi oche nke Veterans Prostate Cancer Awareness Foundation na otu n'ime ndị ọrịa Dr. Feller, na-ekwu, "Ntụkwasị obi nke e wuru n'etiti ndị otu ndị ọrụ agha bụ ihe siri ike ịkọwapụta."
Crosby na-agbakwụnye, "Mee oge gị na dọkịta na-ahụ maka nlekọta ahụike gị maka otu anụ ahụ kwa afọ, gụnyere nyocha ọbara cancer prostate, nyocha dijitalụ dijitalụ, na mkparịta ụka gbasara ọrịa cancer prostate."
HALO Diagnostics na-enye nyocha prostate na saịtị HALO na Indian Wells, California na HALO's Prostate Laser Center na Houston, Texas.
• Nnwale PSA: Akwadoro maka ndị nwoke niile 50+ na ndị nwoke 45+ nwere akụkọ ihe mere eme ezinụlọ nke ọrịa kansa prostate.
• Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI): mpMRI bụ ngwá ọrụ nyocha dị elu nke nwere izi ezi ka ukwuu na ha na-amata ọdịiche dị n'etiti ọrịa cancer na-eme ihe ike na nke na-eto ngwa ngwa.
• Biopsy Liquid: Nnwale mmamịrị na-enyocha ihe ize ndụ nke ụmụ nwoke nwere nnukwu ọrịa kansa ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọkwa dị elu. Ejiri ya tupu mpMRI na tupu biopsy.